Razaro IDE: Yakabatanidzwa Yenharaunda Yekusimudzira yeGUI paLinux | Linux Vakapindwa muropa
Kana iwe uri kufunga kutanga kugadzira Linux application ine graphical mushandisi interface (GUI) muLinux, saka iwe unofanirwa kuziva Razaro IDE, yakasanganiswa nharaunda yekuvandudza iyo ichakubatsira iwe zvakanyanya pabasa rako, ichikubvumidza iwe kuti mukurumidze kugadzira uye kugadzira ma GUI emaapps ane chitarisiko chinoyevedza. Mukuwedzera, ine nhamba huru yezvinhu zvakasanganiswa.
Razaro IDE ine rutsigiro rwakanaka kune akakurumbira kugoverwa, senge kuvhuraSUSE, Ubuntu, Debian, uye Fedora. Kune rimwe divi, zviri nyore kushandisa, kubvira gadzira dhizaini iri nyore kwazvo uye inonzwisisika. Kune izvi isu tinofanirwa kuwedzera kuti yakavhurika sosi, ine inharaunda inoshingairira uye ine hushamwari, uye kuti inochengetedzwa zvakanaka.
Asi simba raRazaro IDE hariperere ipapo. Kune zvimwe zvakanaka zveiyi IDE. Pakati hunhu taura:
Iwe unogona kushandisa akasiyana marudzi emajeti emushandisi interface.
Nekungodzvanya mashoma iwe unogona kuvaka iyo GUI yakavakirwa paGTK2 kana Qt5.
Iri muchinjikwa-chikuva, kuti iwe ugone kukura mukati uye neLinux. Iwe unogona zvakare kuzviita paWindows kana macOS.
Kana iwe uchida kuziva zvimwe dzakakurumbira GUI kunyorera izvo zvakagadziriswa neRazaro IDE Kukupa iwe zano rekuti ino nharaunda yekusimudzira inogona kuzadzikisei, chokwadi ndechekuti pane zvimwe. Semuenzaniso, unogona kuona Double Commander uye PeaZip. Zvichida iyi yechipiri ndeimwe yeanonyanyo kuzivikanwa uye anoshandiswa muGNU / Linux distros yekumanikidza uye kudzikamisa mafaera kubva kuapp ine GUI mune yakachena maitiro eIzarc, WinRAR, kana WinZIP yeWindows.
Kuti utange naRazaro IDE, unogona kuiwana munzvimbo dzekuzorora dzakakurumbira, saka unogona gadza nyore pamwe neyaunofarira package package. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve iyo projekiti kana yekurodha kurodha, unogona shanyira webhusaiti yayo yepamutemo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Razaro IDE: Yakabatanidzwa Yenharaunda Yekusimudzira yeGUI paLinux
Sezvo ini ndinonzwisisa Razaro pane Delphi dombo, nzvimbo yeBorland yekusimudzira Pascal.
Pane chimwe chinhu chakafanana kune mimwe mitauro seC ++ kana Python? Ndakamira kuronga kare kare uye dzimwe nguva bhagi rinondiruma zvishoma, dambudziko nderekuti ini handisisiri mumood yekuenda kuchinhu chemaziso uye nharaunda yakajeka seiyi yaizobatsira.
Iko kune yakafanana graphical yekuvandudza nharaunda yemimwe mitauro senge C ++ kana Python?
Qt ine Qt Dhizaini uye Qt Musiki. Gtk 3 ine Glade uye Gnome Builder. Gtk 4 Inogona kuuya nechimwe chishandiso mune ramangwana.
Rocky Linux 8.4 inowanikwa. Imwe nzira yekugovera kuCentOS